Waxbarashada iyo Shaqada laga helo ilaha Microsoft ee guriga
Kala-guurka Degdegga ah : helitaanka istaraatiijiyooyinka, ilaha, iyo teknolojiyada si dhakhso leh loogu abuuro fasallo internetka ah oo ka caawiya ardayda, macallimiinta, iyo kuliyadu inay helaan habab cusub oo ay ku xirmaan oo wax ku bartaan.
Ku dhis Kalsooni Qalab kasta : iskugu keen xiriir fool ka fool ah, shaqo, iyo wadahadal hal xarun oo bilaash u ah iskuulada iyo jaamacadaha.
Ka Hirgal Ardeyga : hel qalabyo bilaash ah oo kaa caawiya sidii ardayda loo heli lahaa tabar, firfircoon, iyo dariiqa loo maro waxbarashada iyo kobaca.
Bilaabeyso Deeqda MN - Howlaha Ganacsiga
Deeq lacageed oo loo isticmaali karo kharashyo badan, oo ay ka mid yihiin:
Barnaamijka amaahda ee wadada weyn
Deeqaha Horumarinta Ganacsiga Miyiga (RBDG)
Lacag deeq loogu talagalay ganacsatada yar-yar ee miyiga ah (ma jirto lacag xadidan oo ugu badnaan; hase yeeshe, codsiyada yar yar waxaa lasiiyaa mudnaan sare)
Daynta SBA 504 waxay siisaa meheradaha maalgelin go'an oo lagu iibsado hantida muddada-dheer.
Khidmadaha waxaa loo adeegsan karaa iibsashada dhulka, dhismaha, iyo qalabka sidoo kale in lagu maalgeliyo kharashaadka xidhitaanka.
Hay'ada Horumarinta Dhaqaalaha Bottineau waxay siisaa maalgalin dulsaar hoose ganacsiyada sidii qalab maalgalin oo farqi ah.
Amaahan amaahdu waxay u dhexeeyeen cabbir dhan $ 3,000 ilaa $ 250,000 waana kuwo is bedbeddela oo ku filan oo ka jawaabi kara baahiyaha mashaariicda shaqsiyadeed.
Ujeedada ugu weyn ee lacagaha waa in la ballaariyo saldhigga maaliyadeed ee bulshada iyadoo la abuurayo: shaqooyin cusub; ballaarinta saldhiga canshuuraha ee deegaanka; kordhinta maalgashiga maalgashiga; wanaajinta jawiga meheradda iyo soo jiidashada dadka Bottineau aagga howlaha madadaalo.
Kaydso Deeqda Horumarineed ee dukaamada horaantooda
Deeqda Horumarinta Bakhaarka Bakhaarka ayaa loo sameeyay in lagu caawiyo kor u qaadida muuqaalka qaabdhismeedka ganacsiga ee ka jira Degmada Bowman iyo magaalooyinkeeda.
Hay'adda Horumarinta ee Degmada Bowman (BCDC) waxay u dhigmi doontaa boqolkiiba kontonka kale illaa ugu badnaan $ 1000.
Deeqdani waxaa loogu talagalay ganacsatada cusub iyo ganacsiyada jira ee qorsheynaya inay ku fidaan Carrington.
Eeg shuruudaha gudaha.
Barnaamijka deeqda ee wajiga waxaa loo sameeyay in lagu taageero dhamaan meheradaha kujira xadka magaalada Carrington.
Lacagta deeqda wajiga loo isticmaali karaa dib u cusboonaysiinta ee dhismaha bannaanka.
Tani waxay lacag siisaa ganacsatada markay abuuraan jagooyin cusub.
$ 500 Shaqaalaha Sida buuxda ushaqeeya (36+ saacadood / usbuuc)
$ 250 QAYBTA WAQTIGA EE SHAQADA (inkayar 36 saacadood / usbuucii)
Barnaamijkani wuxuu bixiyaa amaah ah 3-5% dulsaar.
Amaah Deynta Deegaanka Cavalier County wuxuu bixiyaa $ 400,000.
Barnaamijkani wuxuu bixiyaa 0% dulsaar amaahda, deeqaha suurtagalka ah, ama dib u soo iibsiga dulsaarka ganacsiyada magaalada Langdon.
Ujeedada Barnaamijka Dib-u-hagaajinta Bakhaarka Grafton waa in la wanaajiyo, la ilaaliyo oo la hormariyo dabeecadaha taariikhiga ah ee Grafton iyo aqoonsigiisa gaarka ah.
Mulkiilayaasha daneynaya ayaa dalban kara amaah deyn ah oo ilaa 50% ah maalgashikooda dayactirka dhismayaasha, oo aan ka badneyn $ 10,000.
Dhismuhu waa inuu ku yaal aaga Renaissance Zone ama si toos ah ula tartami meherad ku taal Aagga Renaissance.
Magaalada Mandan waxay bilaabeen barnaamijka, halkaas oo milkiileyaasha guryaha leh ee danaynaya ay dalban karaan amaah aan la cafin karin si ay dib ugu cusboonaysiiyaan dhismaha dibedda.
Kaydinta dukaamanka waxaa lagu bixiyaa ugu badnaan $ 30,000 oo deyn cafis ah ilaa 50 boqolkiiba maalgashiga dib-u-hagaajinta dhismayaasha.
Illaa $ 60,000 ayaa laga yaabaa in loo qaddariyo dhismaha geeska ah iyada oo ku xidhan baaxadda mashruuca iyo xaddiga darbiyada dusha sare ee la cusboonaysiin karo.
Caawinta Maalgelinta ee Kobcinta Ganacsiga
Ujeedada barnaamijkani waa in la dhiiri galiyo hormarinta, maalgashiga iyo fidinta bulshada Ellendale Community Community iyo in Ellendale laga dhigo meel wanaagsan oo lagu noolaado laguna shaqeeyo.
Barnaamijku wuxuu siiyaa taageero maaliyadeed ganacsatada iyo milkiilayaasha xarunta si ay horumar ugu sameeyaan xarumaha ay ku shaqeeyaan.
Barnaamijku wuxuu bixiyaa ugu badnaan $ 10,000.
Barnaamijku wuxuu bixin doonaa wax aan ka badnayn 50% mashruuca oo dhan.
Sanduuqaani waa deeq aan faa'iido doon ahayn, oo ah canshuur dhaaf aan canshuur laga qaadin kaas oo qaata oo qaybiya lacag si loogu taageero barnaamijyo iyo mashaariic kaladuwan oo qiimo u leh deegaankeena.
Sanduuqa waxaa aasaasay dadka maxalliga ah ee aaminsan inay siinayaan fursad ay wax ku soo celiyaan, taas oo si wanaagsan noogu anfacday.
Ujeeddada ayaa ah in la bixiyo sanduuq joogto ah oo la taaban karo oo lagu xoojiyo tayada nolosha gudaha iyo hareeraheena.
Dakhliga waxaa loo isticmaalaa in lagu taageero mashaariicda sida jardiinooyinka, iskuulada iyo tas-hiilaadka caafimaadka, oo ay weheliso madadaalo, wax-barasho iyo dhaqanka.
Ujeeddada barnaamijkani waa in la siiyo ganacsatada aagagga ganacsiga ee Garrison dhiirrigelin si loo wanaajiyo ama loo ballaariyo ganacsigooda.
Lacagta ugu badan ee magdhawga GRANT-ka ee meherad kasta waa ilaa 50% qiimaha hagaajinta - oo aan ka badnayn $ 5000.00.
Ujeeddada barnaamijkani waa in la siiyo kooxaha horumarinta bulshada maxalliga ah dhiirigelin iyo kharashaad ku saabsan dhismaha ama hagaajinta xarumaha horumarin doona tayada adeegyada, tas-hiilaadka madaddaalada, ama tas-hiilaadka kale ee adeegsiga dadweynaha ee aagga Garrison.
Lacagta ugu badan ee magdhawga codsi ganacsi kasta waa 50% qarashka hormarinta - kama badna $ 20,000.00.
JDA waxay hadda siineysaa deeq u dhigma hormarinta bakhaarka-ilaa $ 1000.00 wixii ganacsi ganacsi ah ee Hettinger County ee jira ama dib-u-habeyn ah.
Deeqdan waxaa leh ganacsiyada kasta ee Kenmare oo qorsheynaya inay cusboonaysiiyaan oo ay horumariyaan muuqaalka ganacsigooda.
Rafcaanka xannibaadda ayaa aad muhiim ugu ah guusha ganacsi kasta.
Deeqdan waxaa ku jira wax kasta oo macaamiisha siin kara aragti wanaagsan oo ku saabsan dukaanka iyo magaalada.
Sanduuqaani wuxuu heli karaa ganacsatada qaab amaah ama deeq ah.
Eeg shahaadada ganacsiga gudaha.
Waxay bixisaa maalgalinta "farqiga" maalgashiga aasaasiga ah, tafaariiqda, waaxda adeegga, iyo ganacsiyada cusub iyo ballaarinta iyada oo u adeegsanaysa sidii qalab awood u leh maalgashiga gaarka loo leeyahay, kuwa dadweynaha, iyo kuwa maxalliga ah.
Ujeeddada maalgalintan ayaa ah in laga caawiyo abuurista iyo keydinta shaqooyinka loogu talagalay dadka dakhligoodu hooseeyo iyo kan dhexdhexaadka ah.
Eeg waxqabadka ku habboon gudaha.
Deeqdani waxay siisaa ganacsatada New Rockford dhiirigelin si loo wanaajiyo ama / ama ballaariyo ganacsigooda.
Codsaduhu waa inuu siiyaa xog taageeraysa si loo muujiyo in horumarku faa'iido u yeelan doono ganacsigaas iyo bulshada New Rockford.
Barnaamijka "BUMP" wuxuu bixiyaa kaalmo maaliyadeed ganacsatada iyo milkiilayaasha ganacsiga si ay u sameeyaan horumarino lama huraan ah iyo kor u qaadis iyagoo ka dhigaya Oakes meesha ugu wanaagsan ee 'lagu noolaado, ku shaqeysto oo ganacsi ku jiro'.
Eeg horumarin ku habboon gudaha.
PWDF waxay leedahay $ 5,000 Deyn Ganacsi Micro Micro ah oo la heli karo.
Amaahdan u dhigma ayaa loogu talagalay ganacsiyada jira iyo kuwa bilaabaya ee Gold Valley ama Degmooyinka Biilasha.
Lacagta amaahda waxaa kaliya lagu go'amin karaa ilaa inta la heli karo.
Ujeedada Barnaamijka Deeqda Hay'ada Horumarinta Rolla Job (JDA) waa in la aqoonsado laguna qadariyo horumarka ganacsi ee cusub ee ka socda Magaalada Rolla.
Qaddarka deeqda ayaa ku kala duwanaan doona iyadoo loo eegayo warshadaha ganacsiga, baaxada ganacsiga iyo saameynta suurtagalka ah ee bulshada.
Barnaamijkan wuxuu ku wajahanyahay hagaajinta iyo kobcinta abuurka iyo fidinta waaxyadeena ganacsi iyo tafaariiqda ee dhammaan bulshada ku dhaqan Stark County, adkeynu ku nuuxnuuxsanayaa hadafkeena ah abuurida meel ka wanaagsan oo lagu noolaado, lagu shaqeeyo oo lagu koro.
Mashaariicda ku habboon ayaa laga yaabaa inay uqalmaan amaah isku mid ah oo loogu talagalay maal-gelinta mashruuca ilaa ugu badnaan $ 25,000.
Barnaamijyada 'Wishek JDA' waxaa ka mid ah deeqooyin yaryar iyo amaahyo kaladuwan oo loogu talagalay ganacsiyada cusub iyo kuwa aasaasay.
Intaas waxaa sii dheer JDA waxay wadashaqeyn dhow la leedahay hay'adaha maaliyadeed ee maxalliga ah si ay u taageeraan dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee waaweyn.
Fadlan kala xiriir JDA wixii caawimaad ah ee la xiriira horumarinta ganacsiga ee ku saabsan aagga Wishek.
Barnaamijyada 'Wishek JDA' waxaa ka mid ah deeqooyin yaryar iyo amaahyo kaladuwan oo loogu talagalay ganacsiyada cusub iyo kuwa aasaasay. Intaas waxaa sii dheer JDA waxay wadashaqeyn dhow la leedahay hay'adaha maaliyadeed ee maxalliga ah si ay u taageeraan dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee waaweyn. Fadlan kala xiriir JDA wixii caawimaad ah ee la xiriira horumarinta ganacsiga ee ku saabsan aagga Wishek.
Deeqda Horumarinta Bakhaarka Bakhaarka ayaa loo sameeyay in lagu wanaajiyo muuqaalka iyo muuqaalka degmooyinka wax laga iibsado ee ku yaal Main Street iyo Highway 83 iyo in lagu dhiiri galiyo degenaanshaha iyo dib u cusboonaysiinta dhismayaasha banaan iyo dib u haleelay ee bulshada Washburn.
Deeqda waa inay lahaataa konton boqolkiiba ciyaarta gaarka loo leeyahay ilaa $ 5000.
Mashaariicda uqalma waa inay ku dhexjiraan bulshada Washburn oo ay si toos ah ulaxiriiraan ganacsi ama ganacsi mustaqbal.
Gudaha ka eeg shuruudaha kale.